मुख्य समाचार – Page2– जलजला अनलाइन
अस्ट्रेलियामा आप्रवासी तथा भिसा नीति परिवर्तन भएपछि भयो तनाव, के-के भयो परिवर्तन ?
बैशाख ३, अस्ट्रेलिया । दोश्रो विश्व युद्धपश्चात् ७० लाखको हाराहारीमा रहेको अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या सन् २०१९ मा आइपुग्दा करीब दुई करोड ५० लाखको हाराहारीमा छ । यो जनसङ्ख्या वृद्धिका साथै अस्ट्रेलियन अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा आप्रवासीहरूको प्रमुख भूमिका रहिआएको छ। यो खबर कोम खत्रीले देशसंचारमा लेखेका छन् । भौगोलिक हिसाबले संसारको छैटौं ठूलो देश भए पनि जनसङ्ख्याका हिसाबले […]
Posted on April 16, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on अस्ट्रेलियामा आप्रवासी तथा भिसा नीति परिवर्तन भएपछि भयो तनाव, के-के भयो परिवर्तन ?
श्रीमान विदेशमा हुँदा श्रीमती देवरसँग हिँडेपछि…
वैशाख ३, काठमाडौँ । ‘हजामको घर कहाँ हो ?’ ‘यो गाउँको अन्तिम मकान ।’ ठूलो मदरसा हुँदै भित्र छिरेपछि एकजना दारीवाल भेटिन्छन् । टाउकोमा टर्वान लगाएका दारीवाल घामको सिधा किरणबाट बच्न छहारीमा छन् । छेउमा काठैकाठको बाकसजस्तो सानो चियापसल छ । चियापसलवालाको पनि टाउकोमा टर्वान, अनुहारमा दाह्री छ । यो खबर विश्वास खड्काथोकीले अनलाइनखबरमा लेखेका […]
Posted on April 16, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on श्रीमान विदेशमा हुँदा श्रीमती देवरसँग हिँडेपछि…
दुई दिनसम्म वर्षा र हुरीको सम्भावना, कहिले-कहिले हुन्छ ?
बैशाख ३, काठमाडौँ । आज (मंगलबार) भारतबाट पश्चिमी वायु नेपाल भित्रिँदै छ। जसका कारण मेघ गर्जनसहित वर्षाका साथै हावाहुरी र चट्याङको सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन्। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् समीर श्रेष्ठले मंगलबार बिहान साढे ८ बजेतिर दिएको जानकारीअनुसार पानी पार्ने पश्चिमी वायु केही घाण्टाभित्र नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबाट भित्रिँदै छ। ‘अहिले यो वायु […]
Posted on April 16, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on दुई दिनसम्म वर्षा र हुरीको सम्भावना, कहिले-कहिले हुन्छ ?
भोलीदेखि विदेशबाट फर्किने नेपालीहरुको सीप परीक्षण, कुन-कुन सिप परीक्षण हुन्छ ?
वैशाख २, काठमाडौँ | सरकारले मङ्गलबारदेखि विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप परीक्षण गर्ने भएको छ । विदेशमा विभिन्न सीप आर्जन गरेर फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने तथा स्वरोजगार बन्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले सीप परीक्षण गर्न लागिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । मङ्गलबारदेखि यही वैशाख […]
Posted on April 15, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on भोलीदेखि विदेशबाट फर्किने नेपालीहरुको सीप परीक्षण, कुन-कुन सिप परीक्षण हुन्छ ?
चैत ३०, काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएको देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो खबर रमेश भारतीले खबरहबमा लेखेका छन् । सो अनुसार रोजगार गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौताका लागि छलफल र सम्झदारीका लागि आवश्यक ड्राफट आदानप्रदान गरिरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ […]